Ihe data na-egosi ihe mmeri Super Bowl Commercial Winner | Martech Zone
Mgbasa ozi Super Bowl kachasị dị irè nwere ike ọ gaghị abụ ndị ị chere. Ọ bụ ezie na ikike anyị nwere ịnakọta data na-eto eto, ikike anyị ịghọta data ka na-ejide. Na Perscio, anyị otu nke data ọkà mmụta sayensị mere a miri emi analysis of Twitter ọrụ n'oge Super Bowl na chọpụtara na ndị kasị ewu ewu na mkpọsa ngwá ahịa bụchaghị ndị na-arụpụta ihe kasị mma. Ọzọkwa, na njedebe nke isiokwu a bụ echiche mmekọrịta nke data anyị!
Mmetụta mmetụta uche na-adịghị mma na-eduga n'ịbawanye ụda, mana mmetụta uche ziri ezi na-eme ka itinyekwu aka.
Imirikiti mmadụ ugbu a maara nke ọma na mgbasa ozi mba niile mara ebe ha na-egbu nwa ewu ahụ na njedebe. Mkpebi a na-awụ akpata oyi n'ahụ na nke jọgburu onwe ya dugara na nnukwu nzaghachi na mgbasa ozi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ahịa ahapụlarị kacha tweeted Nsonaazụ gosiri na mba niile dị ka onye mmeri, mana anyị nwere obi abụọ.
Echiche anyị bụ na ọ bụ ezie na nzaghachi na-adịghị mma na-eduga n'ọtụtụ nza, ọ nwere ike ọ bụghị ụdị ọrụ Mba chọrọ n'ezie. Na njedebe, ọ nwere ike ịbụ Microsoft merie mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge Super Bowl.
Otú Ọmụmụ Ihe ahụ Si Rụọ Ọrụ
Nke mbu, enwere ihe kariri 28.4 nde zuru ụwa ọnụ tweets n'oge egwuregwu. Sava anyị ingest jidere ihe dị ka nde 9 nke ndị a maka ọmụmụ ihe a. Anyị na-eche na nke ahụ bụ ezigbo mma sample size, banyere 32%.
The Perscio ọmụmụ ihe dị iche na onye ọ bụla na-egosi na anyị na-ese foto na tweets niile, ọ bụghị naanị ndị ekekọtara na akaụntụ nke ndị mgbasa ozi. Nke a pụtara na anyị nwere ozi karịa ihe ị nwere ike ịdọrọ na Twitter API.
Anyị wepụtara data site na tweets n'ụzọ abụọ, jiri ha abụọ asụsụ nkịtị nakwa dị ka kpọmkwem @ ukara Twitter kwuru. Dịka ọmụmaatụ, iji atụnyere tweets niile McDonald dakọtara na ụdị niile (w / o isi obodo ma ọ bụ otutu) na @Mcdonalds.
Anyị na-agba ọsọ niile tweets site na ihe a maara dị ka echiche nyocha nke na-eji algọridim chọpụta ma ọ bụrụ na tweet dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma (Polarity), yana eziokwu ma ọ bụ echiche (Isiokwu).
Anyị chịkọtara ọtụtụ ndepụta _____ maka kacha tweeted, ọtụtụ echiche, na ọtụtụ nkezi mmetụta.
N'okpuru nke ọ bụla akwa Ihe, anyị depụtara ụzọ iri atọ retweets ka anyị nwee ike iji anya gị hụ ihe ahịa ọ bụla dị ka ya.
Ọnụ ọgụgụ Raw - Branddị site na Mpịakọta
Ngosipụta A - Na-egosi ọtụtụ tweets na “asụsụ okike”
Na Ngosipụta A, anyị bu ụzọ chọọ iburu n'uche na McDonalds mERIRI na olu dị ọcha. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta sayensị data anyị kwuru na ịbanye na Super Bowl, McDonalds enweworị okporo ụzọ dị elu.
Ya mere na-agbazi maka isi-akara nke tupu egwuregwu, Mba niile nwere ike ịgụta dị ka onye mmeri nke olu site na azụmaahịa ha.
Ọzọkwa na Ngosipụta A ị nwere ike ịhụ na nso mba ahụ bụ Skittles, Pepsi, na Doritos. Microsoft bụ n'ezie ihe dị anya na ndepụta ahụ, yabụ ị nwere ike ịnọ na-eche n'oge a; gịnị kpatara anyị ga-eji chee na Microsoft meriri? Ọ dị mma, nke a bụ n'ihi na BIG ọdịiche dị n'etiti etu ndị mmadụ si ekwu okwu, na otu esi arụ ọrụ mgbasa ozi.
Njikọ aka na Chatter
Ka azụmahịa wee gbanwee tweet ka ọ bụrụ ihe a na-ahụ anya, a ga-enwerịrị ihe ọ bụla. Maka Twitter, omume ndị pụtara ìhè bụ:
Soro akaụntụ azụmahịa
Pịa njikọ na tweet
Ya mere anyi lere anya na data iji hu onye kacha nweta omume site na olu Twitter ha na 5 kacha elu bụ:
@Mcdonalds (ọzọ, ha adịlarị elu)
Yabụ ebe a ị hụrụ Microsoft ka na-eme nke ọma karịa Nationwide na ịnweta ọtụtụ omume. Anyị mekwara nlele nyocha nke URL ndị dị na iyi Twitter, na Microsoft nwere njikọ kachasị na-alaghachi na ngalaba ha. Ma gịnị banyere mmetụta? Onye na-enweta ịhụnanya kachasị na Twitter?
Positive vs. Na-adịghị mma Echiche
Na Ngosipụta B - Akaụntụ na nyocha asụsụ kacha elu dị na mbara igwe (nke ziri ezi ma ọ bụ nke na-adịghị mma) na isiokwu (eziokwu ma ọ bụ echiche).
Na Ngosipụta B, ị nwere ike ịhụ nnabata anyị niile na oke asụsụ asụsụ ala anyị na-achọpụta dị ka polarity (nke ọma ma ọ bụ nke na-adịghị mma) na isi okwu (eziokwu ma ọ bụ echiche). Brandsdị kachasị dị mma @onyedikachi, @IGIHE, na @wix. Mostdị ụdị anyị kachasị njọ bụ victorias nzuzo, t-mobile, na-eju-anya mba nile. Ya mere, ị nwere ike ịhụ nke ọma na imirikiti okporo ụzọ maka mba niile adịghị mma.
Maka inwe nnukwu olu, McDonalds na Microsoft bụ ndị kachasị elu. Nke a pụtara na ha anaghị enweta ọtụtụ okporo ụzọ, mana mkparịta ụka ahụ kachasị mma.
Yabụ ọ bụrụ na ị gbakwunye ya niile, Microsoft bụ naanị onye mgba kacha elu na-eme nke ọma na metrik atọ a: olu, njikọ aka, na mmetụta.
N'ezie, anyị chọrọ ka nke a doo anya, ebe anyị chere na Microsoft meriri n'asọmpi azụmaahịa Super Bowl; McDonalds na-emeri mgbasa ozi mmekọrịta, oge niile.
Caveats na Trivia
Mgbe anyị sere ọtụtụ tweets, ọ bụghị ha niile. Offọdụ n'ime data a nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya na 100%.
Uzo ndi ozo tinye Budweiser n'elu akwukwo a, ma anyi enweghi ike ichota ihe kpatara ya. Anyị amaghị ihe kpatara ọdịiche ahụ, mana anyị chọrọ ịnakwere ya.
Achọpụtaghị usoro ntọala anyị maka McDonalds n'ime anya anyị n'ihi na anyị enweghị ntọala maka onye ọ bụla. McDonalds gosipụtara nnọọ nnukwu mkpọtụ na-abanye n'egwuregwu ahụ anyị nwere itinye ya n'ime nkwubi okwu anyị.
@IGIHE na @IGIHE nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị jikọtara na tweet ha na-ahụ ihe ngosi kachasị-kwa-tweet.
Anyị anwaghị #Nwankwoukwu nke bụ hashtag a ma ama (ọjọọ anyị). Agbanyeghị, nyocha ndị ọzọ na-egosi na ọ baghị oke olu iji metụta nsonaazụ anyị.
Perscio bụ onye ọlụlụ gị lekwasịrị anya n'ịmepụta ohere Big Data. Ọkachamara anyị pụrụ iche na-enye anyị ohere idozi ọdịiche dị n'etiti teknụzụ ụwa nke Big Data na akụkụ bara uru nke atụmatụ azụmahịa. Anyị na gị na-arụ ọrụ ịkọwapụta atụmatụ, họrọ ngwaahịa, mejuputa azịza ma wulite ikike ịhazi iji nyochaa na iji anya nke uche data. Mụtakwuo ma budata akwụkwọ akụkọ anyị, Enwere Nnukwu ofwa nke Data N'ebe ahụ.
Tags: mgbe niileazụmahịa kacha mmakacha mma superbowl azụmahịannukwu dataBMWLexusMcDonaldmicrosoftmba nilemmetụtaechiche nyochaskuulOkwesirinyocha mmadụelekọta mmadụ mediasuper nnukwu eferennukwu efere azụmahịasuperbowlTwitterwix
Gee ihe dị mkpa na Twitter na Narratif